Nhau - Chii Chiri Kuberekwazve Madhora?
Vanozvarwa patsva Vacheche madhora akafanana nehupenyu, anonyanya kutorwa nemaoko madhiragi ayo ave anozivikanwa zvakanyanya nevateresi uye vanofarira zvakafanana kumativi ese United States uye mhiri kwemakungwa. Kuunganidza aya madhoiri kwave chinhu chinotandadza chakapararira pasi rose, sezvo vateveri vachitsvaga chaiwo, akanaka, uye akasarudzika reobrns yekutenga nekuchengeta nekusingaperi.
Pakutanga yakasikwa mukupera kwema1980 uye kutanga kwema1990, kubva pamakore avo ekutanga, vanhu vazhinji vakawira murudo neaya anodikanwa, anoshamisa uye echokwadi vacheche vanozvarwa patsva vanogona kuunganidzwa, kutengeswa, kutengeswa, kuratidzwa uye -zve- kudiwa. Inozivikanwa zviri pamutemo seRaborn Baby zvidhori kana Kuberekwazve Vacheche, madhiragi anonyanya kutsvakwa ndeawo anonyanya kufanana nevana vapenyu vachangoberekwa. Izvi zvinokwanisika kugadziriswa nemaoko-kuumba maReborn kubva kune akasiyana vinyl kana epurasitiki zvigadzirwa mune yakaoma uye inotora nguva maitiro anozivikanwa se "kumukira." Aya madhodhi emhando yepamusoro anowanzo kukanganiswa sevana vapenyu — kunyanya neavo vasina kujaira madhiragi kana anotariswa kure. Kunyangwe vateresi vanochengeta kireshi ine akati wandei akasiyana madhizaini ekugadzira anoratidzwa mumacheche evana, machira evacheche, kana mune zviitiko zvinounganidzwa, kazhinji maReborn anogamuchirwawo mumhuri, uye anorapwa nerudo uye rudo chero mwana achangoberekwa anogona kubva kumhuri yake.
Vanhu vazhinji vanounganidza Vanozvarwa patsva Vacheche semadhora kana sekudyara. Vazhinji vateveri vevacheche vanozvarwa patsva vanounganidza akati wandei madhiraini, asi vachandiudza kuti kuberekwa patsva ndiko kwavanodisisa nekuda kwerudo rwakadzama uye nemhando yepamusoro iyo idhodhi idzi dzinoratidza. Kuunganidza aya madhodhi chinhu chekutandarira icho iwe chaunogona kutanga chero nguva muhupenyu hwako, uye nekuenderera kwemakore mazhinji ari kuuya.
Rimwe boka iro rinowanzo farira kuzvarwa patsva kwevana zvidhori vabereki vakarasikirwa nemwana kana achangozvarwa. Kuberekwa patsva kwemadhora inzira inobata, yakanaka yekuyeuka mwana wako akarasika, kana kunyangwe sechipo chemwana wako iye zvino akura. Maitiro ekuveza akaomarara uye kana nyanzvi ichinge yaberekwazve ine mufananidzo wemwana wako, iye anozokwanisa kuenzanisa chaizvo maficha emwana neako.
Kana iwe usingade kugadzira tsika yekuzvarwa patsva yemwana mudhori, isu zvakare tine akasiyana muunganidzwa weakapedza kuberekwazve mwana madhiragi - anowanikwa kutumira kwauri pakarepo! Shingirira kuburikidza neyeedu gallery uye tsvaga wakaberekwazve mwana mudhori uyo anotaura newe! Chidhori chega chega chakagadzirwa nemaoko uye chiri 100% chakasarudzika, zvichiita chero mwana akazvarwa patsva iwe waunotora kubva kune ino saiti kuwedzera-kwe-kwe-mutsa kuunganidzwa rako.
Pamusoro pekuunganidzwa vakazvarwa patsva vacheche, vanhu vazhinji vanozviwana vachipinda mukuita kwekuita kwavo vega! Ikoko nzira yakapusa yekusvibisa maoko ako uye kutanga kugadzira madhoiri ako ndeyokutenga yakazvarwa patsva yemwana mudhori kit kubva kuEbay. Paunenge iwe wawana kit, iwe unogona kuisa zvidimbu pamwe chete uye kupenda rako rako ganda reganda.
Isu tinongokurudzira kuyedza kugadzira mwana wekuzvarwa patsva kana iwe uine ruzivo, kana uri muimbi kana mhizha mune mamwe matunhu, sezvo maitiro ekumutsiridzira anogona kunge akaoma, nguva-yakasimba, uye yakaoma. Nekudaro, kana iwe uchida kuyedza, kugadzira rako rekuzvarwa patsva mwana mudhori inogona kuve chiitiko chinogutsa, uye iyo inokutendera iwe kuti ugadzire chaiyo inomiririra kana chidhori chaunoda kugadzira.
Unoda kuve wakazvarwa patsva mwana muenzi?
Kana iwe uchinyatsonakidzwa kuumbwa uye kupenda zvako zvidhori, vazhinji vanozvarwa patsva vanomhanya vakabudirira vakazvarwa patsva vacheche zvidhoma mabhizinesi uye vanoratidza madhodhi avo kuburikidza nezvitoro paEbay. Vacheche vanozvarwa patsva vanotengesa chero kupi kubva pamadhora makumi manomwe nemashanu kusvika paUS $ 1000, uye kune musika muhombe uye unokura wemadhora aya. Vazhinji vanozvarwa patsva maartist vanogadzira diki tambo yeakasiyana akazvarwa patsva emana zvidhori mamodheru ayo angave akaomarara kuwana. Nekuita kutsvaga kweEbay, unogona kuwana zvitoro zvekuzvarwa patsva nemawongororo, zvipupuriro, uye mifananidzo yezvakanaka zvevacheche vanozvarwa patsva.
Kana iwe urikufunga nezve kutenga iyo yakazvarwa patsva mwana mudhori, ingo rangarira kuti kupenda vana vakazvarwa patsva chikamu chakakosha chedzorero yekuita. Tarisa mhando yepamusoro maartist uye avo vanodavira kuti mwana wega wega anozvarwa patsva anofanirwa nerudo rukuru uye kutarisisa kune zvakadzama seinotevera. Bvudzi remwana uye eyelashes ndeimwe nguva-yakasimba yekuveza chidhori, saka nyatsoteerera kunaka kweizvi zvinhu. Nekuti maitiro aya akakosha, zvese zvese zvinogona kutora nguva yakareba. Isu tinopa zano kuti ubate wako akaberekwa patsva mwana mudhori mugadziri usati watenga kuti ukurukure zvinhu izvi navo. isu tinogona kupindura chero mibvunzo iwe yaungave unayo nezve yakazvarwa patsva yemadhora. Isu tinovimba unonakirwa nemwana wako akaberekwa patsva, sezvo aya madhori anogona kuunza mufaro wakawanda kune hupenyu hwako hwese!